Ihe ndi ozo di na ya Otu Di na Nwunye
Mee atụmatụ njem gị ugbu a!
Gaa na 20% si n'ụlọ nkwari akụ nọrọ ebe ọ bụla n'ụwa site na ịde akwụkwọ na A Couple for Road. Anyị na-akwado naanị engines anyị na-eji, ma kwado dịka ndị mmekọ mmekọ. Naanị pịa njikọ dị n'okpuru ebe a, ma dee ebe ị nọ!
Anyị ejirila Booking.com maka ọtụtụ ọnụ ụlọ nkwari akụ, ma mba ma ụlọ. Ha nwere ngwa ntinye akwụkwọ dị mfe, na ụfọdụ n'ime ọnụego kachasị mma!
Trekeffect na-enye gị ohere ịnụrụ kpọmkwem site na ndị obodo na ndị njem mara mma bụ ndị maara ebe ọ kachasị mma! Ha nchekwa data nchekwa nke ndị njem-edozi itineraries na-enyere gị aka ịga njem n'enweghị atụmatụ na nsogbu.
Ihe omuma bu otu n'ime anyi na ndi ozo, ebe anyi zoro njem site na Peru na Mexico na England! Tụkwasị na nke ahụ, ha nwere ngwụcha ụgwọ ọrụ.
Travelocity bụ ebe anyị na-eji eme ihe karịsịa na Europe na North America, na-enwekarị ọnụahịa niche maka ọnụahịa ndị na-adịghị eme njem na mpụga obodo ukwu.
Anyị hụrụ Hotels.com, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-achọ naanị ịchọta ezigbo ụgwọ ụlọ ezumike maka obere oge. Ọtụtụ mgbe, ebe anyị na-aga mgbe anyị na-achọ nkwụsịtụ ọnụahịa!
LoveHolidays.com na-enye aka nchịkọta mgbanwe anọ iji dokwuo anya ezumike gị ma ọ bụ ezumike gị! Ị nwere ike ide akwụkwọ n'ihu maka ọnụ ala na-erughị ebe ọ bụla n'ụwa, na-eme atụmatụ na ịkwụ ụgwọ dị mfe!
Iji chọta ụgbọelu ụgbọ elu kachasị elu, ị ghaghị ịmepụta ihe - ma ọ bụ nwee nnukwu ụlọ ọrụ nke na-arụ ọrụ maka gị. Njikọ dị n'okpuru ebe a ga-akpọrọ gị na ibe ibe anyị, ebe ị ga-ahụ 40% pụọ na ụgbọelu ụlọ na nke mba ụwa!
Cheapflights.com bụ ezigbo akụ na ụba ịchọpụta oge ntinye oge na ụgbọ elu ndị na-edeghị akwụkwọ na ọ bụla n'akụkụ ụwa niile! Anyị ejiwo nke a maka ọtụtụ njem na US na Caribbean.
JustFly.com bụ ezigbo akụ maka njem ụlọ, karịsịa mkparịta ụka nke ikpeazụ mgbe ị na-achọ anya ịpụ.
Skyscanner bụ nrọ nke backpacker, ebe ị nwere ike ịchọ ọnụ ala ọ bụla, ụgbọ elu na-abịanụ site n'obodo ọ bụla dị n'ụwa ma chọta ebe ndị na-adịghị ego iji gaa ebe ọzọ ị ga-aga.
Ndepụta bụ nnukwu onye nchịkọta, ebe anyị chọpụtala na anyị na-enweta nnukwu ego na obere-karịa ụgwọ mgbasa ozi maka ụgbọ elu.
Anyị bụ ndị na-akwado isi n'ịmụ ihe ọbụlagodi iwu ndị isi na asụsụ ọzọ tupu anyị eme njem. Ọ dị mma, na-egosi nkwanye ùgwù maka ọdịbendị na ndị bi n'ala a, ma na-eme ka ị kwanyeere ha ùgwù. Ndị a bụ ngwaọrụ anyị na-amụta na ya, ị nwekwara ike ịmụta ya!
Echiche echiche nke na-eduga n'eziokwu imikpu na nkuzi asụsụ, Preply.com bụ ihe ntanetị n'ịntanetị ebe mmadụ nwere ike ịmụta asụsụ na gburugburu ụwa. Ha na-ejikọta ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịmụta asụsụ dị iche iche site na Skype, ma tinye gị n'ọnọdụ ịnọ n'ọrụ ojiji ihe ị na-amụta, nke na-eduga n'ịmụmụ ihe ngwa ngwa.
N'agbanyeghị ebe ị na-aga njem, ọ dị mkpa ịmara otú ị ga-esi banye ebe ahụ, na otu esi aga gburugburu ebe ị nọ na- Ebe ahụ. Site na ụgbọ okporo ígwè dị na Europe ruo n'ọdụ ụgbọ ala kachasị mma, ị nwere ike ịdabere na ndụmọdụ anyị tụkwasịrị obi na nke a nwalere!
Ike gwụrụ ị na-akwụ ọtụtụ narị mmadụ na-eme njem ụgbọ ala gị n'ọdụ ụgbọ elu? Jiri Ogige Ijere Ịgbagharị ụgbọ ala gị n'akụkụ ọdụ ụgbọ elu maka nanị ole na ole dollar kwa ụbọchị, ma jiri ụgbọ mmiri na-agba ọsọ na-eji ngwa ngwa ha dị mfe.
Anyị enweela nnukwu nsogbu site na iji ntuziaka maka akwụkwọ maka ịgbazite ụgbọ ala n'ụlọ, na ha nwere ọtụtụ ụgbọ ala ịhọrọ site na ọnụ ala.
Nhọrọ kachasị mma maka ndị njem azụahịa, Ụgwọ nwere ezigbo ụgwọ ọrụ nke na-enye gị ohere iwukwuru n'efu na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa.
A bara uru bara uru banyere ụdị nke ndị njem njem nwere ike na-atụ anya na a ụdị njem mkpuchi iwu. Nke a bụ ezigbo ihe enyemaka site na Tụlee na ọ dị mkpa ịnweta mkpuchi mkpuchi njem n'oge ndị ọzọ. N'ime ihe onwunwe anyị chọtara, nke a bụ Ntuziaka Insurance Insurance kachasị.
Ọ dị njọ iche na ị dị ime na-egbochi gị ịpụ na ezumike nke ndụ. N'agbanyeghi uzo nke ime ime, ihe onwunwe di Holidaysafe ga-eme ka ndị njem jiri obi ike gaa n'èzí, na-echekwa na ha adịghị emerụ onwe ha ma ọ bụ nwa ha nsogbu.